Nyika Yekufambisa Zvemukati Zvekushambadzira | Martech Zone
Muvhuro, Kukadzi 18, 2013 Muvhuro, June 8, 2015 Jenn Lisak Golding
Nese tekinoroji iyo yave kuwanikwa, zvemukati zviri kudyiwa munzira dzakasiyana siyana uye pamidziyo yakawanda yakasiyana. Nepo matafura uye mahwendefa vari vatambi vakuru mumutambo, nhare mbozha dzinoita senge dzine simba rakakura pakubaya kuburikidza nemitero uye kubhurawuza. Muna 2013, kushambadzira kwemukati mefoni kunounza kudzoka kukuru mukudyara kana kukaitwa nemazvo.
Isu takaunganidza tsvakiridzo kubva kune yedu yemubatanidzwa blogging chikuva mutengi, Compendium, uye email kushambadzira software mutengi, ExactTarget, kuratidza zvinoitika zvekushambadzira nhare pamusoro pemakore apfuura uye izvo zvichiri kuuya. Kana iyo data rese rikaiswa pamwechete, paive nezvakawanikwa zvinokatyamadza:
Vhura mitengo pamidziyo mbozhanhare yawedzera ne300% kubva Gumiguru 2010 kusvika Gumiguru 2012.
Nharembozha email inogadzira kutendeuka kwakapetwa kaviri senge zviitiko zvemagariro kana kutsvaga.
Nhare inogona kunge isingareve "uchienda." 51% yevanoshandisa nharembozha vekuUS vanotsvaga, kutsvaga, uye kutenga pane nharembozha kumba.
Kushanyira pawebhu pane mbozhanhare kana piritsi chinhu chakakwirira nemusi weChina pa15.7%.
Kutengesa mameseji eSMS kuri kuwedzera kuve kwakakurumbira, iine 31.2% yemasangano anoshandisa zano iri kuti awedzere kubaya.
Ndeipi mamiriro ekushambadzira zvemukati zvefoni? Pinda mumutambo, kana kurasikirwa nemukana wekubaya kuburikidza, kutendeuka, uye kuita.
Tags: kutauriranamobile zvemukati kushambadziramafoni efonisms kushambadzaSMS yekushambadzira mamesejimahwendefa
Kuchinja Kwekushambadzira Funnel?
Feb 18, 2013 at 9:22 PM
Iyo email yakavhurika nguva pakati pe mobile uye desktop shanduko inonakidza! Zvinoita sekuti tinosvetukira pachiratidziri chedu chakakura mangwanani asi tobva tatanga zvishoma nezvishoma kudzoka kufoni yacho. Wow!
Kukadzi 18, 2013 na2: 51 PM
Chaizvoizvo, Doug. Iniwo ndakashamisika nekuwanda kwatinoshandisa nhare kubhurawuza (kwete chete maSMS) zviitiko pamba.
Kukadzi 19, 2013 na4: 07 PM
Hei Jenn, zvimwe zvinonakidza zvinyorwa pano, uchizvida. Ndakabvunza mubvunzo kutenderedza izvi paSES london gore rapfuura, saka shamisika kuti ndeupi maonero ako / chirevo chako.
Kunyangwe iwe uchiona kuti kutendeuka kuri kumusoro pane nharembozha yekutenga uye ecommerce, ndinoshamisika kuti zvimiro zvakataridzika sei kuti vangani vanovhura / verenga email asi vobva vatendeuka kuburikidza nedesktop, saka uchishandisa akawanda ekubata mapoinzi kutendeuka (zvakare zviite zvakaoma kuteedzera?). Mufaro - Russell
Hei Russell! Ndatenda nekutaura kwako. Ini ndinofunga iwo mubvunzo wakanaka, uye ini ndaizopokana kuti maitiro angu pachezvangu anogona kuratidza izvi (kuzvitarisa pane mbozhanhare, asi kutenga pane desktop).
Ini handina manhamba ari nyore, asi ndakambobata nemubvunzo uyu kare. Heano mafungiro angu (zvimwe kubva pabhizinesi psychology maonero):
- Kana iwe uri kure nekunyaradzwa kweimba yako kana tafura, ndinofunga shanduko pane mbozhanhare (kutenga) zviri kumusoro. Tiri zera rekugutsikana nekukasira, uye kana tichiida, tinozviita izvozvi. Kana isu tisingade kutenga ipapo ipapo uye ipapo, isu tinogona kuisa bookmark kana kuichengeta neimwe nzira. Nekudaro, kana isu tikasazvichengeta sechinhu chinodiwa kana chatinofanira-kuve nacho, ipapo isu tinogona kuzokanganwa uye hatizombodzoka kunze kwekunge isu tichienderana nemabhukumaki edu kana tiine chiyeuchidzo. Mazhinji mabhizinesi eB2C ane chiyeuchidzo cheemail kana tikaisa chimwe chinhu mungoro yekutengera, asi ini ndaizofungidzira kuti kana tikasatenga pafoni ipapo ipapo, tichaenda tichitenga pakombuta, kana, zvinosuwisa kumutengesi, hatizotengi zvachose.
- Kubva pakuona kwekutevera, apa ndipo panogadzirwa michina yekushambadzira. Pane zvishandiso zvinokutendera kuti utarise vatengi vako vachivhura maitiro uye nekugadzira chimiro chemutengi. Dai ivo vaive vatengi vekare, izvi zviri nyore kwazvo kuita. Zvinogona kuve zvakaoma kana ivo vasati vatoverengerwa se tarisiro mune yako system.
- Ko akawanda ekubata mapoinzi anoita kuti zviome kuteedzera shanduko? Hongu. Zvirokwazvo. Asi zvinoreva here kuti hazvigoneke? Kwete - isu tinongoda maturusi epamberi uye zviwanikwa zvakatsaurwa kuti tiwane kufambiswa kwebasa kwakakodzera munzvimbo. Izvi zvinodhura, asi pakupera kwezuva, zvingangobatsira nekuchengetedza uye kuvimbika.
Saka, zvakazara, kwete, ini handina matanho ekushandurwa uye kubhurawuza pane mbozhanhare uye piritsi, wobva washandura pane desktop, asi kuteedzera maitiro evatengi kuburikidza nekushambadzira otomatiki kunobatsira izvi. Ndatenda! Kana iwe uchida kuenderera mberi nekutaurirana, ndapota inzwa wakasununguka kusvika pa Twitter: @jlisak.